यूरोप/क्यानडाबाट रिजेक्टेड एक यूवा, जो पर्यटन गरेर मासिक ३ लाख कमाउँछन् ! Bizshala -
यूरोप/क्यानडाबाट रिजेक्टेड एक यूवा, जो पर्यटन गरेर मासिक ३ लाख कमाउँछन् !
काठमाण्डौ । ‘सक्छौ जागिर नखाउ, सक्दैनौं जागिर खाउ’ भन्ने भनाईमा उद्यमशीलताले धैर्य भएर कुनै पनि क्षेत्रमा हात हाल्ने हो भने बिदेशी भूमि नगई नेपालकै माटोमा सून फलाउन सकिने र नेपालमा नै पैसाको बोट पाईन्छ भनेर प्रमाणित गरेका पात्र हुन्–उत्तम गौतम । ३० वर्षीय गौतमले पर्यटन व्यवसायलाई आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाउँदै लोभलाग्दो सफलता हासिल गरेका छन् । उनको छोटो अवधिमै प्राप्त सफलताको कथा अरु युवाका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।
२०४६ सालमा काभ्रेपलाञ्चोक चौरीदेउराली गाउँपालिका ५ मा जन्मेका गौतम हाल काठमाडौ ३५ पेप्सीकोलामा बसोबास गर्छन् ।
मध्यम परिवारमा जन्मेका उनका बाबा रिटायर्ड नेपाल आर्मी हुन् भने ३ दाजुभाइमध्ये माहिला छोरा हुन् ।
आफूलाई पर्यटन व्यवसायी भन्न रुचाउने उनी वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम महासंघमा क्षेत्रीय कमिटी सदस्यसमेत छन् । हाल उनी स्नातकोत्तर तह व्यवस्थापनका विद्यार्थी समेत हुन् ।
गाउँमा एसईईको पढाई सकिएपछि २०६२ सालमा राजधानी काठमाण्डौ छिरेका गौतमले दाईको मेडिकल सेन्टरमा संलग्न हुँदै ३ वर्ष काम गरेका थिए ।
सेन्टरले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवाहरु प्रदान गरेको र सोही ज्ञानलाई सदुपयोग गर्दै २०६८ सालमा मैतीदेवीमा गोर्खा एजुकेसनल ट्रेनिङ्ग सेन्टर संस्थापना गरेको उनले सुनाए । जसले हाल पनि वैदेशिक रोजगारी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । यहाँ बिदेश काम गर्न जाने नेपालीहरुलाई २ दिने तालिम दिने गरेको संचालक गौतमको भनाई छ । २ दिने अभिमुखीकरण तालिम लिएबापत ७ सय रुपैयाँ तालिम शुल्क लिने गरेका गौतमले बिदेशमा नठगिउन् भनेर सिकाउने गरेको दाबी गरे ।
पहिले महिनाभर ७ सय जनालाई अभिमुखीकरण तालिम दिएका हाल २ सयजनासम्मले तालिम लिने गरेको उनले सुनाए । ‘अहिले उपत्यका बाहिर पनि यस्ता अभिमुखीकरण तालिम हुने भएकाले यो संख्या घटेको हो ।’ उनले थपे ।
उनको ट्रेनिङ सेन्टरले जापानीज र कोरियन भाषा समेत अध्यापन गराउँदै आएको छ ।
यसैबीच उनले त्यसका साथमा गौतम ट्राभल्स एण्ड टूर्स पनि खोलेका छन् । ‘अरु पनि केही गरौं भन्ने सोच भएकाले टुरिजम ठीक लागेको हो।’उनले भने–‘मुलुकभित्र नेपालीहरुको आन्तरिक पर्यटन मेन्टालिटी बढेको र टूर होलिडे प्याकेज चल्ने व्यवसाय मैले देखेर गौतम होलिडेज २०७२ सालबाट सुरु गरेको हँु ।’
नेपालको रमणीय र पर्यटकीय विभिन्न नयाँ–नयाँ ठाउँहरुमा आन्तरिक पर्यटनको अथाह सम्भावना देखेर यो क्षेत्रमा हात हालेको उनको तर्क छ । उनले हाल नेपालभित्र मुस्ताङ, रारा, तिलिचो, कालिञ्चोक, चित्लाङ्ग सैलुङ्ग लगायतका टूर प्याकेजका साथसाथै बिदेशको टूर प्याकेजको सेवा समेत दिने गरेको गौतमले बताए ।
उनी आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मानिएका केही देशबाट रिजेक्टेड पात्र समेत हुन् । कुरा २०६५/६६ सालतिरको हो, जब गौतमले क्यानडा, जापान, यूरोप जाने प्रयास गरे, तर ती देशका दूताबास वा भिजा अफिसले उनलाई रिजेक्ट गरिदियो । यो रिजेक्सनले उनमा नेपालमै बसेर केही गरौं भन्ने भावनालाई थप बलियो बनाइदियो ।
आजसम्म कतै जागिर नगरेका उनले व्यापारमा भविष्य देखेर पर्यटन व्यवसायमा होमिएको बताए । साथीभाइको सल्लाह, चिनजान र आफूले गरिरहेको अभिमूखीकरणले दिमागमा क्लिक गरेपश्चात गौतम होलिडेजको सूत्रपात गरेको गौतमले विगत कोट्याए । केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा चलेका गौतम आफ्नो मिहिनेतलाई नै गडफादर मान्ने गरेको बताउँछन् ।
मैतीदेवी र सातदोबाटोस्थित आफ्ना दुई शाखाबाट महिनाभरिमा २ हजार बढीले होलिडेज प्याकेज लिने गरेको उनको दाबी छ ।
खर्च कटाएर महिनाको चोखो ३ लाख नाफा हुने गरेको उनले सुनाए । ३० वर्ष नपुगी सफलताको बाटोमा हिँडिरहेका गौतमले १५ जनालाई प्रत्यक्ष र ६० जनालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिइरहेका छन् ।
आम युवाहरुलाई नेपालमै बसेर केही गर्न सुझाउने गौतम भन्छन्–‘व्यापार गर्नेलाई रिस्क हुन्छ, रिस्क मोले र धैर्यता राखे व्यापारमा जत्ति पैसा अरु ठाउँमा छैन । बस् आफ्नो काममा केन्द्रित र निरन्तरता हुनुपर्यो । नेपालमा छिटो फल खान जागिर गर्नुपर्छ, नआत्तिने हो भने व्यापार । अझ पर्यटनको क्षेत्रमा त प्रचूर संभावना छ ।’
साथीहरुको सल्लाह मानेर एकाध कम्पनीका सेयर दोश्रो बजारमा लगानी समेत गरेको गौतमले बिजशालासँग आफ्नो सेयर अनुभव बताए ।
गौतमका अनुसार मिहिनेत, निरन्तरता र आत्मविश्वास सक्सेस मन्त्र हुन् ।
आन्तरिक पर्यटनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक पर्यटनमा क्रेजलाई चुनौति ठानेका गौतम पर्यटन उद्यम अवसरै अवसरको खानी रहेको बताएका छन्।
आफूलाई अहिले पनि सक्सेस नठान्ने उनले सक्सेस गतिहीन भएको तर्क पेश गरे । सफल हुन धेरै समय लाग्ने र इच्छा आकांक्षा असीमित भएकाले आफू जीवनपर्यन्त निरन्तर संघर्ष गरिरहने अठोट व्यक्त गरे ।
आगामी दिनमा व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय टूर प्याकेज विश्वभर र धेरै ठाउँमा शाखा कार्यालय खोल्ने योजना भएको खुलासा गरे ।
जीवनलाई फूलको नाम दिने गौतम मिहिनेत गरे फूल, नभए काँडा हुने बताउँछन् ।
सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रमात्रै घोषणा गर्दै हिँडेको, तर न्यूनतम सेवा तथा पूर्वाधारमा ध्यान नदिएकोमा उनीजस्ता पर्यटन व्यवसायी रुष्ट रहेका बताए।
सरकारले प्रचारप्रसार मात्रै गर्ने परिपाटीदेखि दिक्क भएका उनले सरकार एक्लै हिँडेको आरोप समेत लगाए । सरकार र पर्यटन व्यवसायीबीच सहकार्य, छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर त्यस्तो नभएकोमा उनी असन्तुष्ट छन् ।
टूर गाईडलाई समेत तालिम दिनुपर्नेमा गौतमको सुझाव छ ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सके पर्यटनले गर्दा देशमा समृद्धिको चाहना पूरा हुनसक्ने भन्दै गौतमले २०२० को नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न व्यवसायीले आफ्नो तप्काबाट सहयोग गर्नुपर्ने र सरकारको पनि पर्याप्त ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।